Xafiiska Horumarinta Waraabka iyo Dooxooyinka DDSI oo Xaflad Qado-Sharafeed u Sameeyay Qaarka mid ah Qurba joogta DDSI ee ku sugan xarunta deegaanka Jigjiga. - Cakaara News
Xafiiska Horumarinta Waraabka iyo Dooxooyinka DDSI oo Xaflad Qado-Sharafeed u Sameeyay Qaarka mid ah Qurba joogta DDSI ee ku sugan xarunta deegaanka Jigjiga.
Jigjiga(CN) Axad-August-30-2015.Xafiiska horumarinta waraabka iyo dooxooyinka DDSI ayaa xaflada qado sharafeedka ugu sameeyay city crown huteel jijiga qaarka mid ah qurba joogta DDSI ee ku sugan xarunta deegaanka ee jigjiga. Xafladaasi qado sharafeedka ah ayaa waxaa ka soo qaybgalay wasiirka horumarinta waraabk iyo dooxooyinka DDSI mudane suldaan khayre, wasiir ku xigeenka xafiiska horumarinta waraabka mudane ibraahin muwaarig, wasiirku xigeenka qurba joogta DDSI mudane cabdi khaliif (dhoonbe) ku xigeenka wakaalada dhismaha hawlaha biyaha DDSI mudane guuleed iyo marti sharaf kale.
Waxaana ugu horayntii ka hadlay xafladaasi wasiirka horumarinta waraabka iyo dooxooyinka DDSI mudane suldaan khayre oo si qoto dheer u sharaxay xidhiidhka wanaagsan ee ka dhexeeya qurba joogta iyo xukuumada iyo doorka ay qurba joogta DDSI ku leedahay hirgalinta qorshayasha horumarineed ee la hirgaliyay sanadihii ugu danbeeyay gaar dhinaca ka faa’iidaysiga khayraadka dalkeena. Wasiirka oo hadalkiisa sii wada ayaa ka warbixiyay jihooyinka iyo istaraatajiyadaha xukuumada ee ku wajahan ka faa’iidaysiga khayraadka dihin gaar ahaan wabiyada iyo dooxooyinka iyo doorka kaga wajahan qurba joogta DDSI, wuxuuna ku booriyay in ay qurba joogta DDSI ka faa’iidaystaan fursadahaasi siwayne ku xii xoojiyaan dhinaca maalgashiga DDSI.
Dhankooda qurba joogtii loo sameeyay xafladan casuumada hadhimo sharafeedka ah, oo ay mid ahaayeen gudoomiyaha jahliyada DDSI ee wadama Benelux mudane ahmed mukhtaar iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada SEDYO swedan mudane huways oo ka hadlay xafladaasi ayaa si mug leh ugu mahad celiayay guud ahaanba xukuuamda DDSI sida baaxada wayn ee ay u xoojinaysa markasta xidhiidhka qurba joogta iyo masuuliyiinta xafiiska waraabka ee ku casuumay qado sharafeedkan.waxayna sheegeen in ay markasta qurba joogta DDSI siwayn ugu heelan tahay ka qaybqaadashada hirgalinta hawlaha horumarka sida xawliga ah uga socda dalka iyo deegaankaba siina xoojinayaan ka faa’iidaysiga fursadaha dhinaca maalgashiga